iPhone Yakanamira Pane Kutenderera Wheel? Heino Kugadzirisa! - Iphone
iphone haisi kuzotsigira
ndinoita sei kutenderera ipad yangu skrini
ndinogona here kushandisa chando kupisa kana ndine nhumbu
iPhone Yakanamira Pane Kutenderera Wheel? Heino Kugadzirisa!
IPhone yako yakanamatira pane yakasviba skrini ine vhiri rinotenderera uye hauna chokwadi nei. IPhone yako haisi kudzokera shure zvisinei nezvaunoita! Muchikamu chino, ini ndichatsanangura maitiro ekugadzirisa dambudziko kana yako iPhone yakanamatira pane inotenderera vhiri .
Nei iPhone Yangu Yakamira Pagirivhi Inotenderera?
Kazhinji yenguva, yako iPhone inonamira pane rinotenderera vhiri nekuti chimwe chinhu chakakanganisika panguva yekumisikidza maitiro. Izvi zvinogona kuitika mushure mekuvhura yako iPhone, kugadzirisa software yayo, kuigadzirisa kubva kuZvirevo, kana kuidzosera kune zvisizvo zvefekitori.
Kunyangwe iri shoma, chinhu chemuviri che iPhone yako chinogona kukuvara kana kuputswa. Yedu nhanho-nhanho gwara pazasi ichatanga nesoftware troubleshooting nhanho, ndokubatsira iwe kuwana rutsigiro kana yako iPhone iine dambudziko rehardware.
app isiri kushanda pa iphone
Zvakaoma Reset Yako iPhone
Yakaomarara reset inomanikidza yako iPhone kuti ikurumidze kudzima uye kudzokera pairi. Kana yako iPhone ikapunzika, kuita chando, kana kunamatira pane inotenderera vhiri, yakaoma reset inogona kuitisa kuti itendeuke zvekare.
Maitiro ekuita reset rakaomarara anosiyana zvichienderana nekuti ndeipi modhi iPhone yauinayo:
iPhone 6s, iPhone SE (Chizvarwa Chekutanga), uye ekare mamodheru : Panguva imwe chete bata uye bata bhatani reKusha uye bhatani remagetsi kusvikira iyo skrini yaenda yakasviba zvachose uye logo yeApple yaonekwa.
iPhone 7 : Panguva imwe chete pinda uye ubatisise vhoriyamu pasi bhatani uye bhatani remagetsi kusvikira iyo skrini iende nhema uye iyo Apple logo inoonekwa.
iPhone 8, iPhone SE (Chizvarwa Chechipiri), uye mhando nyowani : Dhinda uye usunungure vhoriyamu kumusoro bhatani, pinda uye isunungure vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya ubatise parutivi bhatani kusvikira chiratidziro chasviba uye Apple logo yaonekwa.
Kugadziridza kwakaomarara kunogadzirisa dambudziko iri nguva zhinji. Kana zvadaro, pakarepo backup iPhone yako ku iTunes (MaPC nemaMacs anomhanya Mojave 10.14 kana apfuura), Tsvaga (Macs inomhanya Catalina 10.15 uye nyowani), kana iCloud . Kana dambudziko iri rikaramba, iwe uchazoda kopi yedata rese pa iPhone yako!
DFU Dzoserai Yako iPhone
Kunyange zvakaoma Reset anogona kwekanguva kugadzirisa dambudziko kana iPhone wako rakabayirwa riri Kukosa vhiri, hazvizovi kubvisa zvakadzama Software nyaya iyo yakakonzera dambudziko pakutanga. Tinokurudzira kuisa yako iPhone muDFU modhi kana dambudziko rikaramba richiitika.
A DFU (mudziyo firmware update) kudzorera ndiyo yakadzika iPhone kudzorera uye yekupedzisira nhanho iwe yaunotora zvachose bvisa software kana firmware dambudziko . Tambo yega yega yekodhi yakadzimwa uye kuiswazve pane yako iPhone, uye yazvino vhezheni yeIOS yakaiswa.
Ivai nechokwadi negadziriro yeparutivi iPhone wako usati kuzviisa muna DFU muoti. Paunenge wagadzirira, tarisa yedu DFU dzorera gwara kudzidza maitiro ekuita nhanho iyi!
Inguva yekubata Apple rutsigiro kana yako iPhone ichiri yakanamatira pane inotenderera vhiri. Ita shuwa ku ronga musangano kana iwe ukaronga nezvekutora yako iPhone muGenius Bar. Apple zvakare ine runhare uye rarama hurukuro tsigira kana iwe usingagare pedyo nenzvimbo yekutengesa.
Tora Yako iPhone Kune A Spin
Wakagadzirisa dambudziko ne iPhone yako uye iri kubatidza zvakare. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media kudzidzisa yako mhuri, shamwari, uye vateveri zvekuita kana yavo iPhone yakanamatira pane inotenderera vhiri.
Une chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone? Vasiye ivo muchikamu chemashoko pazasi!